Baiboly pejy 701 - Ny Baiboly
Voalohany < 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 Manaraka Farany
1 Joany toko 1 (tohiny)
8Raha milaza antsika ho tsy manam-pahotana isika, dia mamita-tena, ary tsy ao anatintsika ny marina. 9Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Andriamanitra, ka hamela ny fahotantsika sy hanadio antsika amin'ny tsy fahamarinanana rehetra. 10Raha milaza antsika ho tsy nanota isika, dia mampandainga azy isika, ary tsy ao anatintsika ny teniny.
1 Joany toko 2
Ny Kristy mpisolo vava antsika - Ny fitandremana ny didy - Ny fitiavana - Ny tsy fitiavana izao tontolo izao - Ny tokony hitoerana ao amin'ny Kristy.
1Anaka, nanoratra izany aminareo aho, mba tsy hanotanareo. Ary raha misy nanota, manana mpisolo vava ao amin'ny Ray isika, dia Jesoa-Kristy, ilay marina. 2Izy no sorom-pifonana mahafaka ny fahotantsika; ary tsy ny antsika ihany, fa ny an'izao tontolo izao koa.
3Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, dia raha mitandrina ny didiny isika. 4Izay milaza ho mahalala azy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary tsy ao anatiny ny marina. 5Fa izay mitandrina ny didiny no manana ny fitiavana an'Andriamanitra lavorary ao aminy tokoa ; ary amin'izany no ahafantarana fa ao aminy isika. 6Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy ny nandehanany koa.
7Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo, fa didy ela izay efa azonareo hatramin'ny voalohany; ary izany didy ela izany dia ilay teny efa renareo teo. 8Didy vaovao ihany koa anefa no soratako aminareo, izay hita marina amin'ny Kristy sy aminareo, fa efa misava ny aizina, ary miposaka sahady ny fahazavana marina. 9Izay milaza azy ho ao amin'ny fahazavana, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mbola ao amin'ny aizina ihany. 10Izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fanafintohinana ao aminy. 11Fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao anatin'ny aizina sy mandeha amin'ny maizina, ka tsy mahalala izay halehany, fa voajamban'ny aizina ny masony.
12Manoratra ho anareo zanaka aho, satria voavela ny helokareo noho ny anarany. 13Manoratra ho anareo aho, ry ray, satria nahalala ilay hatramin'ny voalohany hianareo. Manoratra ho anareo aho, ry zatovo, satria naharesy ilay ratsy hianareo. 14Nanoratra ho anareo ankizy aho, satria efa nahalala ny Ray hianareo. Nanoratra ho anareo ray aho, satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany hianareo. Nanoratra ho anareo zatovo aho, satria mahery hianareo ka mitoetra ao aminareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy hianareo.
15Aza tia izao tontolo izao, na ny zavatra amin'izao tontolo izao. Fa izay tia an'izao tontolo izao dia tsy manana ny fitiavana ny Ray ao anatiny. 16Satria ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao, ny filàn'ny nofo, ny fitiavan'ny maso, ny rehaka amin'izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny Ray, fa avy amin'izao tontolo izao. 17Mandalo izao tontolo izao sy ny filàny, fa izay manao ny sitra-pon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay.
18Anaka, izao no ora farany. Fa araka ny efa renareo dia ho avy ny antikristy, ary indro efa misy antikristy maro ankehitriny, ka izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. 19Teo amintsika no niala ihany izy ireo, nefa tsy anisantsika; fa raha anisantsika izy, dia ho niara-nitoetra tamintsika; izy no niala dia mba hampiharihary fa tsy anisantsika izy rehetra. 20Fa hianareo kosa dia voahosotr'ilay masina, ka mahalala ny zavatra rehetra. 21Tsy noho hianareo tsy mahalala ny marina no nanoratako ho anareo, fa noho hianareo mahalala izany indrindra, ary mahafantatra fa ny lainga rehetra dia tsy avy amin'ny marina. 22Iza no mandainga raha tsy izay mandà fa i Jesoa no Kristy? Ary ny antikristy dia izay mandà ny Ray sy ny Zanaka. 23Izay rehetra mandà ny Zanaka, dia tsy manana ny Ray koa; fa izay manaiky ny Zanaka ihany no manana ny Ray.
24Koa aoka hitoetra ao anatinareo izay renareo hatramin'ny voalohany. Fa raha mitoetra ao anatinareo izay renareo hatramin'ny voalohany, dia mitoetra ao amin'ny Zanaka sy ny Ray koa hianareo. 25Ary ny zavatra nampanantenainy antsika dia ny fiainana mandrakizay.
26Nanoratra izany ho anareo aho, ny amin'ireo manangoly anareo. 27Ary hianareo, ilay fanosorana noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila hampianarin'olona hianareo, fa izany fanosorana izany no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, ary marina fa tsy lainga ny fampianarany, ka tomoera ao aminy araka ny fampianarany anareo. 28Ary ankehitriny, anaka, mitoera ao aminy, mba hanan-toky isika rahefa miseho izy, fa tsy horoahina hiala aminy amin-kenatra amin'ny andro hahatongavany.
29Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina dia zanany naterany.
1 Joany toko 3
Ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny demony - Ny fitiavana ny rahalahy - Ny fanatonana an'Andriamanitra amin-toky.
1Endrey ity haben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, amin'ny iantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady tena izany tokoa isika! Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, dia noho izy tsy mahalala azy. 2Ry malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika; fa amin'ny andro hampisehoana izany, dia fantatsika fa hanahaka azy isika, satria hahita azy araka ny tena toetrany.
3Izay rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany, mba ho madio tahaka azy. 4Izay rehetra manota dia mandika ny lalàna, satria ny ota dia fandikana ny lalàna. 5Fantatrareo anefa fa izy no niseho dia mba hanala ny fahotana; ary tsy mba misy ota ao aminy. 6Izay rehetra mitoetra ao aminy, dia tsy mba manota; ary izay manota dia tsy mba nahita azy na nahalala azy.
7Anaka, aza mety hofitahin'olona hianareo, fa izay manao ny marina ihany no marina toa azy marina koa. 8Izay manota dia avy amin'ny demony, fa mpanota hatrany am-boalohany ny demony. Ary ny handrava ny asan'ny demony no nisehoan'ny Zanak'Andriamanitra. 9Izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, satria mitoetra ao aminy ny voa nafafin'Andriamanitra, sady naterak'Andriamanitra izy ka tsy mahazo manota. 10Amin'izany no ahafantarana izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny demony. Izay rehetra tsy manao ny marina dia tsy avy amin'Andriamanitra, toy izany koa izay tsy tia ny rahalahiny. 11Satria araka ny teny azo sy renareo hatramin'ny voalohany dia tsy maintsy mifankatia isika, 12fa tsy mba hanahaka an'i Kaina izay avy amin'ilay ratsy ka namono nahafaty ny rahalahiny. Ary ahoana moa no namonoany azy? - Dia satria ratsy ny asany, fa ny an'ny rahalahiny kosa dia marina.
13Aza gaga, ry rahalahy, raha halan'izao tontolo izao hianareo. 14Isika dia mahalala fa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, satria tia rahalahy. Izay tsy tia kosa mitoetra ao amin'ny fahafatesana. 15Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona manana ny fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny.
16Izao no nahafantarantsika ny fitiavana: nahafoy ny ainy ho antsika izy. Koa tsy maintsy mahafoy ny aintsika ho an'ny rahalahy koa isika. 17Raha misy manan-karena amin'izao fiainana izao, ka mahita ny rahalahiny mahantra, nefa mihirim-belona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? 18Anaka, aza tia am-bava sy amin'ny teny fotsiny, fa amin'ny asa sy amin'ny fo tokoa.
Pejy: Voalohany < 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3358 seconds